May 18, 2019 - MM Live News
GTC ကျောင်းဆရာမအား နေအိမ်တွင်သတ်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ တရားခံ ပင်းဘောကျေးရွာလူသတ်မှုဖြစ်စဉ်မှ တရားခံဓါတ်ပုံအားမိုးကောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန် မိုးကောင်း မေ ၁၈ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ပင်းဘောကျေးရွာအုပ်စု၊ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာနေ GTC ကျောင်းဆရာမအားနေအိမ်တွင်သတ်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသူ တရားခံ၏ ဓာတ်ပုံနှင့်အချက်အလက်များကို မိုးကောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှထုတ်ပြန်ထားရှိကြောင်းသိရသည်။ တရားခံအားတွေ့ရှိပါက ပင်းဘောနယ်မြေရဲစခန်း ဖုန်း( ၀၇၄-၆၆၁၁၉/၀၉၄၃၀၈၂၆၂၄) နှင့် နီးစပ်ရာရဲစခန်းများ၊အုပ်ချုပ်ရေးရုံးများသို့ သတင်းပေးပို့ကြပါရန် မိုးကောင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းထုတ်ပြန်ထားရှိကြောင်း သိရသည်။ NL(TGA) မိုးကောင်းမြို့နယ်၌ အမျိုးသမီးတစ်ဦး နေအိမ်အတွင်း ဓားဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံး မိုးကောင်း မတ် ၁၈ ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ် ပင်းဘောကျေးရွာအုပ်စု ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာ၌ မတ် ၁၇ ရက်က အမျိုးသမီးတစ်ဦး နေအိမ်အတွင်း ဓားဒဏ်ရာများဖြင့် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ပင်းဘောနယ်မြေရဲစခန်းမှ သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မတ် ၁၇ ရက် ညနေ ၃ နာရီခွဲက […]
အကြော်ဗန်းမှောက်ခံရလို့ ဘေးလူက သနားပြီး ၅၀၀၀ ကူညီလိုက်တာကို နည်းလို့ အကြော်သည်ရဲ့ မိန်းမက ဒုတ်ကိုင်ပွဲကြမ်း…..
May 18, 2019 MM Live
ပထမပို့ ကူညီပေးခဲ့သူ တင်ပြထားသောပို့…. ခုနက မြင်​​တွေ့ရတာ စိတ်​ကို မ​ကောင်းဘူး😭😭 သူ့ကိုယ်​သူ ရိုးရိုးသားသား လုပ်​​ကိုင်​စား​သောက်​​နေတာကို ​၀ယ်​မယ်​ဆိုပြီး ​ခေါ်တယ်​တဲ့. ပြီး​တော့ မ၀ယ်​​တော့ဘူးဆိုပြီး ရန်​ရှာ​တော့ ​ရောင်းတဲ့လူက မ​ပေး​တော့နဲ့​ပြောတာကို ဆဲဆိုပြီး …. အ​ကြော်​ဗန်းကိုလှန်းကန်​ပြီး လူကိုလဲ ထိုးတယ်​တဲ့ …ဆီပူ​တွေလဲ ​ခြေ​ထောက်​မှာ ရွှဲလို့…. ကိုယ်​​တွေ ဆိုင်​ကယ်​ ဖြတ်​သွားတုန်း ​​တွေ့တာက . ဟိုလူရန်းကား​တွေက ​ဈေးသည်​ကို ၀ါးရင်းတုတ်​နဲ့ လိုက်​ရိုက်​​နေတာ မ​နေနိုင်​လို့ ဆင်းပြီး သွားကူမဲ့အချိန်​မှ ဟို​ကောင်​က ​ပြေးသွားတာ. ဆိုင်​ကယ်​နံပါတ်​​တော့ ရလိုက်တယ်​. ​ဘေးနားက ​ဒူးရင်းသီး​ရောင်းတဲ့ အိမ်​က အမက ၅၀၀၀ ​လှူ​ပေးလိုက်​​တယ်​ အစဆုံးမြင်​တယ်​တဲ့ အက်​အမ​တွေက . အားနည်းတဲ့ လူကို ဘာလို့များ အနိုင်​ကျင့်​ရက်​ကြတာလဲ 😟 […]
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အ​ကြော်​ဗန်းမှောက်တဲ့ သတင်း အဖြစ်မှန်တင်ပြလိုက်ပါတယ်
ကူညီပေးပြီးနောက် အစော်ကားခံရတယ်ဆိုသောပို့….. ဒီစာကို share ပေးကြပါ လူတွေက သူတို့ကို သနားထိုက်လား မထိုက်လားသိအောင်လို့ မူတူး ရဲ့မိန်းမက တုတ်ကိုင်ပြီး ကျမကိုရန်လာတွေ့တယ်တော့ တုတ်နဲ့ရိုက်ပြီး အကြော်ဖိုးကလည်း နင်က၅၀၀၀ပဲပေးတာလားတဲ့ ဟမ်လို့ ကြောင်သွားတယ်… ကျမကကြားထဲက သနားလို့ကူညီပြီး နောက်နေ့ဈေးရောင်းဖိုးမရှိမစိုးလို့ အလကားပေးလိုက်တာလို့ဆိုတာကို မူတူးမိန်းမက နင်တို့နဲ့အမူးသမားသိတယ်မလားတဲ့… အဲ့တာကြောင့်ပေးတာမလားတဲ့ တော် ကြားဖူးဘူးတော့ ကူလည်းကူညီရသေး အော်ဟောက်ပြီး ကျမကိုလာပြောနေတာ ကျမလည်းငါ့ပိုက်ဆံ5000ပြန်ပေး လို့ မူတူးနင်ကပါးစပ်မပါဘူးလား မသိဘူးလားငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသက်သက်ကူညီတာဆိုတော့… မူတူးကဘာပြောတယ်မှတ်လဲ.. မူးတဲ့အကောင်က သူ့လင်မို့နေမှာတဲ့ အဲ့တာကြောင့် သုပိုက်ဆံစိုက်ပေးတာတဲ့ စော်ကားတယ် မိုက်ရိုင်းတယ် တော့ နင်တို့ကစေတနာနဲ့မတန်ဘူး ငါကူညီမိတာမှားတယ် လို့ ငါ့ပိုက်ဆံပြန်ပေးဆိုပြီးတောင်းထားလိုက်တယ် ကျမဆီလာတာတုတ်နဲ့လာရိုက်တော့မလို့လုပ်တယ် မူတူးမိန်းမက နင်တိူ့ငါ့ဆိုင်ရှေ့လာပြီးငါ့ကိုစွတ်စွဲနေတာ အသေရေဖျက်မူနဲ့တိုင်လိုက်မယ် ရဲစခန်းသွားမလား ပြောဆိုတော့ လုပ်လေလုပ်ပေါ့တဲ့ ကျမငိုကကူညီချင်စိတ်ရှိတာ လျာရှည်မိတာပါ […]
သစ်ဖိုးငွေမပေးသဖြင့် ပေါင်းတည်မြို့ ညောင်နီပင်အုပ်စု စူးပုတ်စမ်း တံတားအား သစ်ကုန်သည် မှမီးရှို့
ပေါင်းတည်မြို့ ကျေးလက်လမ်းဉ်ီးမှ တံတားဆောက်လုပ်ရန်အတွက် သစ်ဝယ်ရာ သစ်ဖိုးငွေပေးချေခြင်း မရှိ၍ သစ်ကုန်သည်မှ တံတားတစ်စင်းအား မီးရှိူ့ဖျက်စီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခရိုင် ပေါင်းတည်မြို့ ညောင်နီပင်အုပ်စု စူးပုတ်စမ်း တံတားအား ၂၀၁၉ မေလ ၁၅ ရက် နေ့ ညနေ ၃း၀၀ အချိန်၌ သစ်ကုန်သည် ဦးအေးကျော်သည် စူးပုတ်စမ်းတံတားအား မီးရှိူ့ဖျက်စီးခဲ့သည်ဟု သိရသည် တံတားဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ပေါင်းတည်မြို့ကျေးလက်လမ်းဉ်ီးစီးဌာန မှ ဦးစိုးလှိုင်သည် သစ်ကုန်သည် ဦးအေးကျော်ထံမှ သစ်ဝယ်ယူခဲ့ပြီး ငွေသိန်းပေါင်းများစွာ သစ်ဖိုးရှင်းပေးရမည်ကို ငွေအကြေ ရှင်းပေးလြင်းမရှိ၍ သစ်ကုန်သည် ဦးအေးကျော်မှ ဒေါသထွက်ပြီး ပေါင်းတည်မြို့ ညောင်နီပင်အုပ်စု စူးပုတ်စမ်းတံတားအား မီးရှိူ့ ဖျက်စီးခဲ့သည်ဟု ဒေသခံပြည်သူများ၏ ပြောစကားအရ သိရှိရသည် အဆိုပါ သစ်များမှာ တရားမဝင် သစ်များဖြစ်နေ၍ သစ်ဖိုးငွေ […]
မြင်တွေ့လိုက်ရတာ စိတ်ကို မကောင်းဘူး …..ဘလိုင်းကြီး အနိုင်ကျင့်သွားတာ…..
ရိုးရိုးသားသား အကြော်ရောင်းနေတဲ့ အကြော်သည်ကို မဝယ်ပဲခေါ်ပြီး ရန်စအနိုင်ကျင့် ခုနက မြင်​​တွေ့ရတာ စိတ်​ကို မ​ကောင်းဘူး😭😭 သူ့ကိုယ်​သူ ရိုးရိုးသားသား လုပ်​​ကိုင်​စား​သောက်​​နေတာကို ​၀ယ်​မယ်​ဆိုပြီး ​ခေါ်တယ်​တဲ့…. ပြီး​တော့ မ၀ယ်​​တော့ဘူးဆိုပြီး ရန်​ရှာ​တော့ ​ရောင်းတဲ့လူက မ​ပေး​တော့နဲ့​ပြောတာကို ဆဲဆိုပြီး အ​ကြော်​ဗန်းကိုလှန်းကန်​ပြီး …. လူကိုလဲ ထိုးတယ်​တဲ့ ….ဆီပူ​တွေလဲ ​ခြေ​ထောက်​မှာ ရွှဲလို့….. ကိုယ်​​တွေ ဆိုင်​ကယ်​ ဖြတ်​သွားတုန်း ​​တွေ့တာက .ဟိုလူရန်းကား​တွေက ​ဈေးသည်​ကို ၀ါးရင်းတုတ်​နဲ့ လိုက်​ရိုက်​​နေတာ…. မ​နေနိုင်​လို့ ဆင်းပြီး သွားကူမဲ့အချိန်​မှ ဟို​ကောင်​က ​ပြေးသွားတာ. ဆိုင်​ကယ်​နံပါတ်​​တော့ ရလိုက်တယ်​…. ​ဘေးနားက ​ဒူးရင်းသီး​ရောင်းတဲ့ အိမ်​က အမက ၅၀၀၀ ​လှူ​ပေးလိုက်​​တယ်​ အစဆုံးမြင်​တယ်​တဲ့ အက်​အမ​တွေက …. အားနည်းတဲ့ လူကို ဘာလို့များ အနိုင်​ကျင့်​ရက်​ကြတာလဲ […]
နီပေါနိုင်ငံတွင် ဦးသန့်ရုပ်တု ဖွင့်လှစ်…..
နီပေါနိုင်ငံတွင် ဦးသန့်ရုပ်တု ဖွင့်လှစ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ဦးသန့်ရဲ့ ကျောက်သား ရုပ်တု ကို နီပေါနိုင်ငံ လုမ္ပီနီမြို့မှာ မေ(၁၇)ရက်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့ U Thant House က သတင်းထုတ်ပြန် ပါတယ်။ ဒီရုပ်တုကို ကတ်သ်မန်တူမြို့အနီးက ရှေးဟောင်းမြို့တော်ပတန်က ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်တွေက ထုဆစ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ ဒီရုပ်တုပေါ်ပေါက်လာအောင် လုမ္ပီနီက ဆိုင်းဟိုတယ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ တိုကူဆင်ကဆိုင်း ကကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့တာလို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဦးသန့် ရဲ့ ကျောက်သားရုပ်တုဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ ဒေါက်တာ သန့်မြင့်ဦးက အမှာစကားပြောခဲ့ပြီး တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ရှန်ကာပိုခ်ရာလ်၊ ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး လီလာဂီရိ၊ ဆရာတော်နဲ့ သီလရှင်တွေ၊ နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးထွန်းနေလင်း နဲ့ အစိုးရအရာရှိတွေ တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ လုမ္ပီနီဟာ […]
ဆုကြေးနဲ့တကွ ကြေငြာထားတဲ့ တရားခံ စိန်​၊​ရွှေ၊​ငွေရတနာများ သိန်း​ပေါင်းတစ်​​ထောင်​​လေးရာ​ကျော်​ခိုယူသွား​သောတရားခံ​ မိပြီး …
ဆုကြေးနဲ့တကွ ကြေငြာထားတဲ့ တရားခံ မိပြီး … မြဝတီမြို့၊​အင်​ကြင်​မြိုင်​​ကျေးရွာ၊​ရေ​ပေါ်​ဈေးတွင်​ခ​လေးငိုး​နေလို့ နို့ဗူးယူခိုင်းရာမှ….. စိန်​၊​ရွှေ၊​ငွေရတနာများ သိန်း​ပေါင်းတစ်​​ထောင်​​လေးရာ​ကျော်​ခိုယူသွား​သောတရားခံ​ကျော်​​ကျော်​(ခ)အဏ္ဏဝါ (ခ)ဟာဆန်​(ခ) အငယ်​​ကောင်​အားသုံးခွမြို့နယ်​ကတုံး​ပေါ်​ကျေးရွာနယ်​​မြေရဲစခန်းမှဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်​ ယခုအမှုကို ကိုဘီဝမ်းမှတရားလို၏အကြိမ်​ကြိမ်​အကူညီ​တောင်းခံမှု​ကြောင့်​ဆု​ကြေး​ငွေထုပ်​ပြန်​ လိုက်​ပြီး​နောက်​ပိုင်း သတင်း​ပေးသူ​ သံလျှင်​မြို့​နေသူ​မောင်​​ဇေယျာလင်းနှင့်​ဆု​ကြေး​ငွေကိစ္စအကြိမ်​ကြိမ်​ညိနှိုင်​ပြီး​လေးရက်​အကြာယခုလို​မောင်​​ဇေယျာလင်း၏ရဲစခန်းသတင်း​ပေးပို့မှု​ကြောင့်​တရားခံကိုအခင်းဖြစ်​ပွားပြီးတစ်​လ​ကျော်​အတွင်းဖမ်းဆီးရမိခြင်းဖြစ်​ပါသည်​။ ခိုးယူခံရ​သော​စိန်​၊​ရွှေ၊​ငွေများအားလုံနီးပါပြန်​လည်​ရရှိ​အောင်​အဖက်​ဖက်​မှဝိုင်​ဝန်​ကူညီကြ​သောရဲတပ်​ဖွဲဝင်​များအား​ကျေးဇူတင်ရှိ​ကြောင်း ရေးသားတင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ပါသည်​။ ​နောက်​ဆက်​တွဲအ​သေးစိတ်​အား​နောက်​​နေ့တွင်​​ရေးသားတင်​ဆက်​​ပေးသွားပါမည်​။ ဘီဝမ်း (ဦးအောင်ထွန်းလင်း) ၁၇.၅.၂၀၁၉ ဆုကွေးနဲ့တကှ ကွငွောထားတဲ့ တရားခံ မိပွီး … မွဝတီမွို့၊​အငျ​ကွငျ​မွိုငျ​​ကြေးရှာ၊​ရေ​ပျေါ​စြေးတှငျ​ခ​လေးငိုး​နလေို့ နို့ဗူးယူခိုငျးရာမှ….. စိနျ​၊​ရှေ၊​ငှရေတနာမြား သိနျး​ပေါငျးတဈ​​ထောငျ​​လေးရာ​ကြျော​ခိုယူသှား​သောတရားခံ​ကြျော​​ကြျော​(ခ)အဏ်ဏဝါ (ခ)ဟာဆနျ​(ခ) အငယျ​​ကောငျ​အားသုံးခှမွို့နယျ​ကတုံး​ပျေါ​ကြေးရှာနယျ​​မွရေဲစခနျးမှဖမျးဆီးရမိခဲ့ပါတယျ​ ယခုအမှုကို ကိုဘီဝမျးမှတရားလို၏အကွိမျ​ကွိမျ​အကူညီ​တောငျးခံမှု​ကွောငျ့​ဆု​ကွေး​ငှထေုပျ​ပွနျ​ လိုကျ​ပွီး​နောကျ​ပိုငျး သတငျး​ပေးသူ​ သံလြှငျ​မွို့​နသေူ​မောငျ​​ဇယြောလငျးနှငျ့​ဆု​ကွေး​ငှကေိစ်စအကွိမျ​ကွိမျ​ညိနှိုငျ​ပွီး​လေးရကျ​အကွာယခုလို​မောငျ​​ဇယြောလငျး၏ရဲစခနျးသတငျး​ပေးပို့မှု​ကွောငျ့​တရားခံကိုအခငျးဖွဈ​ပှားပွီးတဈ​လ​ကြျော​အတှငျးဖမျးဆီးရမိခွငျးဖွဈ​ပါသညျ​။ ခိုးယူခံရ​သော​စိနျ​၊​ရှေ၊​ငှမြေားအားလုံနီးပါပွနျ​လညျ​ရရှိ​အောငျ​အဖကျ​ဖကျ​မှဝိုငျ​ဝနျ​ကူညီကွ​သောရဲတပျ​ဖှဲဝငျ​မြားအား​ကြေးဇူတငျရှိ​ကွောငျး ရေးသားတငျ​ဆကျ​​ပေးလိုကျ​ပါသညျ​။ ​နောကျ​ဆကျ​တှဲအ​သေးစိတျ​အား​နောကျ​​နတှေ့ငျ​​ရေးသားတငျ​ဆကျ​​ပေးသှားပါမညျ​။ ဘီဝမျး (ဦးအောငျထှနျးလငျး) ၁၇.၅.၂၀၁၉
ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ တောထဲမှ ထူးဆန်းတဲ့ မြည်​တမ်းသံကြီး…..
ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ တောထဲမှ ထူးဆန်းတဲ့ မြည်​တမ်းသံကြီး ဆံတော်ရှင် ကျိုက်ထီးရိုးစေတီ မရောက်ခင်အတက်လမ်းကွန်ကရစ်အကွဲကြားမှာ ခေါင်းလေးထောင်ပီး မော်ဖူးနေတဲ့ အကောင်လေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လား….. ဘာကြောင့် မိုးတွင်းဖက်တောင်ပိတ်တယ်ဆိုတာသိပြီးမဟုတ်လား….ကျိုက်​ထီးရိုး ဘုရားပွဲရာသီက သီတင်းကျွတ်​လပြည့်​​နေ့မှ ကဆုန်​လပြည့်​​နေ့အထိ၇ လတိတိ​တောင်​ ကျင်းပ​ပေးခဲ့ပါတယ်​။ ဖွင့်​ပွဲ​နေ့နဲ့ပိတ်​ပွဲ​နေ့ကို အခန်းအနား နဲ့ ကျင်းပပြီး အမိန့်​ပြန်​တမ်း ထုတ်​ရပါတယ်​။ ပွဲ​တော်​စတင်​ခင်းကျင်း​တော့မှာမို့ ​တောပိုင်​​တောင်​ပိုင်​ အ​စောင့်​အ​ရှောက်​များနဲ့ မြင်​အပ်​မမြင်​အပ်​ သတ္တဝါများဘုရားနယ်​​မြေမှ ​ဝေးရာသို့ ဖယ်​ရှား​ပေးကြပါဆိုပြီး အမိန့်​ပြန်​တမ်း ထုတ်​ရပါတယ်​။ အဲဒီအခါမှာ ဝမ်းနည်းငို​ကျွေးကြသလိုမျိုး ကြားကြရတယ်​လို့ ရန်​ကုန်​လသာမြို့နယ်​မှ တရုပ်​ဗုဒ္ဓဘာသာအသင်းက နှစ်​စဉ်​သွားဖူးလို့ ထူးဆန်းစွာကြုံခဲ့ကြားခဲ့ရလို့ သိရပါတယ်​။ ပိတ်​ပွဲ​နေ့ကဆုန်​လပြည့်​​နေ့ မှာကျ ပွဲ​တော်​ပိတ်​ပြီဆိုင်​ရာပိုင်​ရာများ ​နေရပ်​ဌာ​နေသို့ ပြန်​လာနိုင်​ပါပြီလို့ အမိန့်​ပြန်​တမ်း ထုတ်​ခွင့်​ပြုတယ်​ ဆိုရင်​ပဲ​တော်​လဲသံကြီးလိုဝမ်းသာလို့ မည်​တမ်းသံကြီး ကြားကြရတယ်​လို့တရုပ်​​တွေက​ပြောကြတယ်​….. ဒါ​ကြောင့်​ ကဆုန်​လပြည့်​ ​နောက်​ပိုင်းမိုးတွင်းမှာ ​တောရဲတိရစ္ဆာန်​​တွေရဲ့ […]
မကြားဝံ့မနာသာ….ဘကြီးတော်စပ်သည့်အမျိုးသားက ၃ နှစ်သမီးကို အိမ်သာထဲတွင် အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
မကြားဝံ့မနာသာ​တွေဗျာ သတိထားနိုင်​​စေဖို့ပါ ၃ နှစ်သမီးကို ဘကြီးတော်စပ်သည့်အမျိုးသားက အိမ်သာထဲတွင် အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား ၃ နှစ်သမီးကို ဘကြီးတော်စပ်သူအမျိုးသားကအိမ်သာထဲ၌ အဓမ္မပြုကျင့်သွားသည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခု မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အထက်မင်းလှမြို့၌ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ အထက်မင်းလှမြို့နယ်၊ ရုံးရပ်မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၌ပန်းရံလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော အသက် ၃၅ နှစ်ရှိတင်ထွေးဆိုသူသည် ၎င်း၏တူမဖြစ်သူ၏ သမီး ၃ နှစ်အရွယ်ကို မေလ ၁၇ ရက်၊ နေ့လယ် ၁ နာရီတွင်အဓမ္မပြုကျင့်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း တိုင်ကြားချက်အရ သိရသည်။ “တင်​​ထွေးနဲ့သူ့ဇနီးကမင်းဘူးမြို့နယ်​​၊​ရေငံအုပ်​စု၊ပက်​ပယ်​​ကျေးရွာမှာ​နေထိုင်​ကြတာပါ၊မင်းလှမြို့ ရုံးရပ်​​မြောက်​ပိုင်းရပ်​ကွက်​ကိုပန်းရံလုပ်​ငန်းလာ​ရောက်​လုပ်​ကိုင်​​နေတာပါ။အဲဒီ​နေ့က သမီး​လေးကတင်​​ထွေးရဲ့ဇနီးနဲ့အတူသူတို့ အလုပ်​လုပ်​​နေတဲ့အိမ်​မှာအတူအိပ်​​နေကြတာပါ။ အဲဒီမှာတင်​​ထွေးကသမီး​လေးကိုအိမ်​သာထဲ​ခေါ်​ဆောင်​သားမယားအဖြစ်​ အဓမ္မပြုကျင့်​ခဲ့တယ်​လို့သမီး​လေးက​ပြန်ပြောလို့ ကျွန်မသိရတာပါ”ဟု ကျူးလွန်ခံရသည့်ကလေးမိခင်​ဖြစ်​သူက​ပြောသည်​။ ယင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီး ၆ နာရီအကြာ ယမန့်နေ့ည ၇ နာရီ၌ ကျူးလွန်ခံရသူကလေးမိခင်ကိုယ်တိုင် ရဲစခန်းသို့တရားလိုအဖြစ် တိုင်တန်းသဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကို ဖမ်းဆီးကာအမှုဖွင့်ပေးခဲ့ကြောင်း မင်းလှမြို့မစခန်းမှူးက ပြောသည်။ “ဒီအမှူက ​ဆွေမျိုး​တော်​စပ်​သူကကယုံကြည်​မှူကိုအခွင့်​​ကောင်းယူပြီးက​လေးမ​လေးကိုအသုံးချသွားလို့ဖြစ်​ပွားခဲ့ရတာပါ၊အမှူကိုခိုင်​မာ​အောင်​တည်​​ဆောက်​ပြီးတရားစွဲတင်​နိုင်​​ရေးစီစဉ်​​ဆောင်​ရွက်​လျှက်​ရှိပါတယ်​”ဟုမင်းလှမြို့မစခန်းမှူး ဒုရဲမှူး […]